अब घरमै बसेर उच्च शिक्षा, के हो खुला विश्वविद्यालय ? | Tungoon
काठमाडौं । जगतबहादुर आलेले अंग्रेजी विषयमा एमएड पास गरेका छन् । पाँच वर्षअघि आयोग पास गरेर स्थायी शिक्षक बनेका छन् । उनी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ स्थित कमला माध्यमिक विद्यालय ढुंग्रेबासमा पढाउँछन् ।
घरकै कोठामा बसेर भर्चुअल कक्षामा पढ्नुपर्छ । सेमेस्टरको सुरुमै तीनदिने प्रत्यक्ष कक्षा लिइन्छ । त्यसपछि तालिका बनाइन्छ । हरेक आइतबार, सोमबार र मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म अनलाइनमार्फत् पढाइ हुन्छ ।
ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर वा एन्ड्रोइड मोबाइलमा विश्वविद्यालयबाट कक्षा सञ्चालन गर्न एलएमएस (लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) र ‘मुडल एप’ जोडिएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै आईडी र पासवर्ड हालेपछि मुडलमा पाँच विषयको सिलेबस र कोर्सहरू खुल्छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको आईडीमार्फत विद्यार्थी जहाँसुकै बसेर पनि तोकिएको समयभित्र कक्षामा उपस्थित हुन सक्छ ।
मुडलभित्रको अनलाइन डिस्कसन फोरम, स्काइप फर बिजनेस, च्याट रुममार्फत विद्यार्थी–शिक्षक कुराकानी गर्छन् । छलफल हुन्छ । अफलाइन सन्देश प्रवाह भइरहन्छ । आलोपालो प्रश्न राख्छन् । जिज्ञासा राख्छन् ।
पियर रिभ्यु गर्छन् । पियर इभ्यालुएसन हुन्छ । असाइनमेन्ट दिइन्छ, लिइन्छ । हरेकको इन्टरनल असाइनमेन्टबापत ४० प्रतिशत अनलाइन मूल्यांकन हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशतको तोकिएको केन्द्रमा पुगेर लिखित परीक्षा दिनुपर्छ । खुला पढाइ भएकाले विद्यार्थीले सबै विषय एकै सेमेस्टरमा पास गर्नैपर्ने बाध्यता रहँदैन ।
‘दश दिनभित्र होमवर्क असाइनमेन्ट बुझाइसक्नुपर्छ, नत्र एघारौं दिनमा बुझाउँछु भन्न पाउँदैन,’ नेपाली विषयको एमफिलका शिक्षक डा. चूडामणि पाण्डेय भन्छन्, ‘छुटेको असाइनमेन्ट फेरि बुझाउन सक्छन् । कुनै विद्यार्थीले तोकिएको तालिका र समयमा कक्षामा बस्न नपाए छुटेको कक्षाको सबै क्रियाकलाप मुडलभित्र रेकर्ड भएर रहेको भिडियो र अडियोमार्फत पढ्न सक्छन् ।’
शिक्षक पाण्डेय काठमाडौंमा भाडाको घरमा बस्छन् । तीनमध्ये एउटा कोठामा प्रविधि जडान गरेका छन् । दिनभरि आफ्नो काम गछन् । तोकिएको दिन साँझ प्रविधिमैत्री कोठामा छिर्छन् । तीन घण्टा विद्यार्थी्िसत सहजीकरण गर्छन् । ‘खुला छलफल हुन्छ र जाँचसमेत लिइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षामा विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी हुने भएकाले सँगै रहेको भान हुन्छ । साप्ताहिक अनलाइन परीक्षा लिइन्छ । त्यसमा विद्यार्थीले एकअर्काको सार्ने, नक्कल गर्ने कम हुन्छ ।’
Previousजलजला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकले छ महिनादेखि तलब पाएनन्
Nextवाइड बडी घोटाला काण्डको अनुसन्धान हरायो
जिल्ला भ्रमणमा मन्त्रीले सके अढाइ करोड, हवाई यात्रा गर्दा पनि बझ्छन् इन्धन